🥇 ▷ Huawei ma ka bixi karaa xannibaadda haddii Mareykanka uu heshiis ganacsi la galo Shiinaha? ✅
Huawei ma ka bixi karaa xannibaadda haddii Mareykanka uu heshiis ganacsi la galo Shiinaha?
Marka la eego qaabdhismeedka dagaalka dhabta ah ee dhaqaalaha ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha, oo ay horseedeen kororka lacagaha laba geesoodka ah; Intii lagu jiray usbuucii hore, Mareykanka wuxuu go’aansaday inuu ku daro Huawei Teknolojiyada, iyo shirkadaha dayax gacmeedkooda liiska madow ee shirkadaha, kaas oo shirkadaha ka soo jeeda Waqooyiga Ameerika, aysan yeelan karin xiriir ganacsi. Tan waxaa ugu wacan eedeymo basaasnimo oo la xiriira shirkadda.
Xaaladdaasi waxay horseedday shirkado waaweyn sida Google, Intel, Qualcomm, ARM, Vodafone, Ururka SD, iyo kuwo kale, ayaa si cad ugu dhawaaqay inaysan mar dambe la shaqeyn doonin shirkadda weyn ee Aasiya. Waxaas oo dhami waxay u horseedi lahaayeen waxa ka dhalan kara dhibaatada sawir ee shirkadda.
Shalay, Khamiista, intii lagu jiray ogeysiisyada qaar, Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump wuxuu muujiyey in Dhibaatada ka haysata shirkadda Shiinaha waxay lahaan lahayd xalka suurta galka ah, iyada oo lagu daro heshiiska ganacsiga ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka.
Trump: “Huawei waa wax aad khatar u ah. Fiiri waxa ay ka sameeyeen aragtida amniga, aragtida millatari ahaan, aad ayey khatar u tahay. Markaa waa macquul in Huawei xitaa lagu dhex daro nooc heshiis ganacsi ah. Haddii aan heshiiskan galno, waxaan qiyaasi karaa in Huawei ay macquul tahay in lagu daro nooc, meel heshiis ganacsi ah. ”
Saxafi: “Sidee taasi u ekaan lahayd?
Trump: “Waxay noo ahaan laheyd wax weyn anaga.”
Saxafi: “Laakiin qaybta Huawei, sideed u naqshadeeyn lahayd arrintaas?”
Trump: “Oh, waa goor hore in la yiraahdo. Waxaan kaliya ka walaacsanahay kaliya Huawei dhanka aragtida amniga. ”
Shirka Donald Trump, 23ka May, 2019
Hadaladaani waxay muujinayaan a is burinta muhiimka ah ee doodaha Go’aankan ka dib in Huawei lagu daro liiska madow: Maxaa ka dhigaya Maraykanka inuu u maleeyo in shirkad ay u egtahay inay basaasiinayso inay si otomaatig ah u joojineyso sidaa daraadeed heshiis ganacsi ayaa sidaas leh? Asalka dhismahan wuxuu umuuqdaa mid sii kordheysa oo ganacsi iyo ilaalin, isla markaana aan ku xirneyn amniga.
Dhiniciisa, afhayeenka Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Shiinaha wuxuu xusay in hadaladiisa ay yihiin oo keliya siyaasad iyo in dhaqanka dowladda Mareykanka uusan gacan ka geysan doonin abuuritaanka jawi ku habboon wadahadallada mustaqbalka.
Saxaafadda Caalamka, waxay aaminsan tahay in dhacdooyinkan taxanaha ahi ay ku soo gabagaboobi karaan kulanka laba geesoodka ah ee ay labada waddan yeelan doonaan inta lagu guda jiro qaab dhismeedka G20 ee Japan.
Xigasho: South China Morning Post & XatakaImage: Dhaqaaleyahan.